Fairfield, Iowa (Transcendental Meditation Enclave) - WRSP
FAIRFIELD, IOWA BCREL IWU
1970: nwa akwukwo UCLA gụsịrị akwụkwọ Robert Keith Wallace, onye na-efe Maharishi Mahesh Yogi na California, bipụtara nsụgharị nke doctoral tesis, na-egosi mmetụta enyemaka nke ntụgharị uche, na Science magazine.
1971-1972: Maharishi mepụtara Science nke Creative Intelligence, na-ezube na mbụ iji kụziere ya dị ka ihe mgbakwunye na mahadum zuru ụwa ọnụ. Ndị na-eso ụzọ malitere usoro a na Yale na Stanford, n'etiti ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ.
1973-1974: Mgbe ọ tụgharịrị gears iji mepụta mahadum nke ya, mmegharị ahụ mepere Maharishi International University (MIU) na oghere mgbazinye na Goleta, California. Ebe ọ bụ na ohere maka ohere ahụ, otu ahụ zụtara ogige ụlọ akwụkwọ Parsons bank dị na Fairfield, Iowa, maka $ 2,500,000. Mụ akwụkwọ na ngalaba bịara n’oge ọkọchị nke 1974. RK Wallace bụ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ.
1975: Onye na-akwado TV bụ Merv Griffin, onye na-arụ ọrụ TM, gbasaa ihe ngosi abụọ na-agba ajụjụ ọnụ banyere guru, na mbido bidoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300,000, akụkụ nke ihe ụmụazụ na-akpọ "mmiri Merv." Nke a gosipụtara oke elu nke mmegharị ahụ na mmalite nke ịrịgo Fairfield.
1975: Ndị nkuzi guzobere Maharishi School of the Age of Enlightenment na Fairfield, ụlọ akwụkwọ elementrị ọkachasị maka ụmụaka ngalaba na ndị ọrụ na MIU.
1976-1979: Ndị nne na nna nke ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọha na eze na New Jersey na ndị ụkọchukwu gbara akwụkwọ ka ha mechie mmemme TM malitere n'ụlọ akwụkwọ, na-ekwu na ha bụ ndị okpukpe n'okike. Mbido ọhụrụ dara. Otu onye ọka ikpe gọọmentị etiti, nke na-achịkwa ndị nne na nna, kwụsịrị mmemme ụlọ akwụkwọ ọha na eze na New Jersey na 1977 ma kpebie mkpebi ya na mkpesa na 1979, na-ebugharị njem ahụ na Fairfield.
1977: Maharishi webatara mmemme TM-Sidhi, nke gụnyere ọtụtụ oge ntụgharị uche kwa ụbọchị na nkwa nke levitation, nke a na-akpọ "Yogic Flying." Nkwupụta nke ofufe na adịghị ahụ anya, nke dọtara ịkwa emo, sitere na ihe odide ochie nke nkà ihe ọmụma Hindu.
1979: Mgbe a baara ya mba na mkpebi ụlọ ikpe gọọmentị megide ịkụzi TM n'ụlọ akwụkwọ ọha, guru nyere oku ka ndị na -atụgharị uche bịa Fairfield na ihe karịrị 1,000 gere ya ntị. Mmegharị ahụ malitere ọrụ na nnukwu ụlọ ntụgharị uche abụọ na kampos MIU, otu maka ụmụ nwoke na otu maka ụmụ nwanyị, nke puku kwuru puku na -atụgharị uche kwa ụbọchị.
1981: Ndị nkuzi tinyekwara ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Maharishi School of Age of Enlightenment na Fairfield, na-enye ụmụ akwụkwọ ohere ịchụso agụmakwụkwọ "dabere na mmụọ" site na ụlọ akwụkwọ ọta akara ruo n'ọkwa doctoral.
1986: A hoputara onye na -arụ ọrụ TM ka ọ bụrụ kansụl obodo na Fairfield, oge mbụ onye na -atụgharị uche meriri ụdị ọkwa a n'obodo. Ndị ọzọ sochiri.
N'afọ 1992: ndị dọkịta TM nọ na US guzobere Natural Law Party, ndị na-agba ọsọ maka ọkwa steeti na nke mba site na Fairfield, gụnyere ọsọ atọ na ndị isi ala US site na ndị isi na-eme njem John Hagelin site na 2000. Mgbasa mgbasa ozi ndị isi dọtara akụkọ na United States.
1995: Mahadum International Maharishi dị na Fairfield gbanwere aha ya na Mahadum Njikwa Maharishi.
1997: Ndị ntuli aka na Fairfield tụgharịrị n'ọnụ ọgụgụ iji merie ndị ọrụ TM na-agba ọsọ maka oche oche ụlọ akwụkwọ na mayoralty. Mayoral nwa akwukwo Democrat Ed Malloy, onye jere ozi na kansụl obodo bidoro na 1992, meriri.
2001: Na-agba ọsọ ọzọ, a họpụtara Malloy ka ọ bụrụ onyeisi obodo nke Fairfield, Iowa, mgbe ọ rụsịrị ọrụ na kansụl obodo ahụ ruo 1998. O meriri onye isi oche nke jere ozi afọ iri abụọ na asatọ.
2001: Ndị na -arụ ọrụ TM kwadoro obodo ọhụrụ, Maharishi Vedic City, kilomita ole na ole na mpụga Fairfield. Obere obodo ahụ gosipụtara ụlọ oriri na nkwari akụ ole na ole, gụnyere ụlọ oriri na ọ spaụ spaụ okomoko yiri chalet French, isi ụlọ ọrụ isi ụlọ ọrụ nke Global Country of World Peace, mmepe obodo ole na ole na kansụl obodo nke ndị mmepe na-arụ ọrụ na ya.
2002: Connie Boyer, onye na-arụ ọrụ TM, Republican na ndụ onye ọ bụla bi na Fairfield, meriri n'ụzọ siri ike n'ọchịchị maka oche ụlọ steeti Iowa.
2003: A họpụtara Boyer na kansụl City Fairfield na ọdịda wee merie ntuli aka iji dobe ntụpọ ahụ, na -eje ozi ruo mgbe ọ jụrụ ịgba ọsọ ọzọ na 2007.
2004: Levi Andelin Butler, nwa akwukwo na MUM, bu onye umuaka ibe ya nwere nsogbu nye ya n'ogige ulo akwukwo. Ihe omume ahụ kpatara nkatọ nke omume nchekwa na ebubo enweghị mpụ banyere ogige, yana ịtụle oke TM n'ihe metụtara ahụike ọgụgụ isi.
2005: Onye na -eme ihe nkiri na onye na -anụ ọkụ n'obi TM David Lynch guzobere ntọala siri ike iji kwado mbọ ịkụziri TM n'ụlọ akwụkwọ nwere nsogbu, na mmemme ndị agha ochie, ụlọ mkpọrọ na gburugburu nrụgide ndị ọzọ na mba niile. Ka oge na -aga, ihe omume nkwado ego nke ntọala ahụ gụnyere ngosipụta nke onye bụbu Beatle Paul McCartney, onye ọchị ọchị Jerry Seinfeld na ndị na -anụ ọkụ n'obi TM ndị ọzọ.
2006: Onye ntụgharị uche Becky Schmitz, onye Democrat si Fairfield, hoputara ya na Senate Iowa, ebe ọ rụrụ ọrụ ruo 2011.
2008: Maharishi nwụrụ na Vlodrop, Netherlands
2011: Boyer meriri ntuli aka na Council Council nke Fairfield.
2012: A hoputara Schmitz na Board of Supervisors maka Jefferson County, Iowa, onye oche oche ya bụ Fairfield.
2019: A họpụtara Boyer ka ọ bụrụ onye isi obodo Fairfield mgbe Malloy jụrụ ịgba ọsọ ọzọ, na eserese eserese kpuru eriri. Onye mmegide na -agba ọsọ nke Boyer bụkwa onye na -eme TM.
2019: Mahadum Njikwa Maharishi gbanwere aha ya na Mahadum Maharishi International, na -egosipụta ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ mba ụwa.
The Ntughari ntụgharị uche transcendental, nke Maharishi Mahesh Yogi mepụtara na 1950s na India wee gbasaa na California na 1960, mepere mahadum dị nso na Santa Barbara na 1973 iji nye "agụmakwụkwọ dabere na mmụọ." Mgbe ahụ, ohere juru eju, na 1974 mmegharị ahụ nwetara ụlọ akwụkwọ kọleji na ndịda ọwụwa anyanwụ Iowa, na Fairfield, mgbe onye isi obodo, Parsons College, dara ogbenye. Mmegharị TM kwagara mahadum ya na Iowa wee bido mmemme nke nyere asambodo site na Ph.D. ogo na nkuzi enyere na nkuzi guru. Ọ mepere ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Fairfield na nkuzi niile metụtara ozizi Maharishi, ka oge na -aga, nabatara ọtụtụ narị ndị na -atụgharị uche.
Ọbịbịa nke ndị na -atụgharị uche gbanwere Fairfield, na -atụgharị ya site na obodo ugbo na -ehi ụra nke nnukwu ihe omume ya bụ ngosipụta mpaghara na arụmọrụ nke 34th Army Iowa National Guard Band gaa ebe ndị mmụọ ime mmụọ nke ọnyá dị iche iche na -eleta mgbe niile. [Foto dị n'aka nri] Ka oge na -aga, ndị na -atụgharị uche wetakwara ndị ama ama site na Hollywood dị anya gaa n'obodo. Ha webatara ụlọ oriri na ọarianụ vegetụ ndị anaghị eri anụ na ụdị ụlọ ahịa dị iche iche, gụnyere ụfọdụ na -ere ihe dị oke egwu. Ndị ọchụnta ego n'etiti ndị na-arụ ọrụ mepụtara azụmahịa dị ukwuu, na-ewe ndị na-abụghị ndị na-atụgharị uche na ndị na-atụgharị uche; ụfọdụ azụmaahịa na -aga nke ọma ebe ndị ọzọ dara. Na mahadum niile na ebe obibi ndị gbasasịrị agbasasị, ọbụlagodi nkuzi sitere na nkwenkwe TM gbanwere na afọ.
Tọrọ ntọala n'etiti 1830, Fairfield toro na narị afọ dịka oche mpaghara nke Jefferson County. Karịsịa ebe a na -ere ahịa maka ndị ọrụ ugbo mpaghara na ụlọ maka ngosipụta steeti mbụ na Iowa, na 1854, obodo ahụ nwetara nkwalite na 1875 mgbe Parsons College mepere ụzọ ya. Sonsmụ nwoke onye ọchụnta ego New York nke nwụrụ na 1855, Lewis B. Parsons, nyere ego iji mepụta ụlọ akwụkwọ Ndị Kraịst na Iowa n'aha nna ha (Jefferson County Online nd). Ndị bi na Fairfield si na ihe dị ka 2,200 na 1870 ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3,100 na 1880, ka kọleji ahụ mere ka akụ na ụba mpaghara, ụkpụrụ nke diri ọtụtụ iri afọ (Population.us 2016). Ka Fairfield toro, ụlọ ndị ama ama gafere obodo ahụ. N'etiti ha: Ụlọikpe Jefferson County na Ọbá akwụkwọ Carnegie, ụlọ ndị e ji brik rụọ chọọ mma na 1893. N'ụlọ akwụkwọ ahụ, otu n'ime ihe ndị ama ama, Barhydt Memorial Chapel, bilitere na 1909 (Fairfield Convention and Visitors Bureau 2021).
Mana kọleji dara na oge ọjọọ site na 1960s, na-akparị aha ọjọọ dị ka ụlọ akwụkwọ "ohere nke abụọ" maka ụmụ akwụkwọ ndị si mba ọzọ pụọ ma bụrụ ebe obibi maka ndị na-ede akwụkwọ. Ka ọ dị ugbu a, ka ụlọ akwụkwọ ahụ na-ebelata, mmegharị TM na-eto eto. O mere ka mmetụta ya gafee mba ahụ na 1970s, wee zụta ogige Parsons n'ihi enweghị ego maka $ 2,500,000 na 1974. N'oge ọkọchị nke afọ ahụ, ndị na-atụgharị uche na ngalaba na-eto eto batara n'ime obodo, ndị bi na-atụ ụjọ na-atụ egwu na anụ ọhịa ga-awakpo ha. -ndị na-emegide omume nzuzo. “N'oge 'hippies' nke nwere akwa jeans adọwara adọwa, nke nwere ntutu dị mkpụmkpụ na ụkwụ efu, ndị ọhụrụ ahụ dị mma n'uwe na uwe; ntutu ha dị mma ma ụkwụ ha nwere akpụkpọ ụkwụ, ”Susan Fulton Welty, ọkọ akụkọ ihe mere eme na Fairfield dere. Ndi ndu TM kpebisiri ike inwe ezi echiche n'ebe obibi mba ha (Welty 1968).
Usoro TM ahụ nyekwara Fairfield agbamume ọzọ na ngwụsị afọ ndị 1970, sitere na isi iyi a na-atụghị anya ya, mkpebi ikpe ụlọ ikpe na-adịghị mma na New Jersey. Ndị otu a nọ na-akụzi usoro ntụgharị uche n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze, na-agọnahụ ya ka omume ya wee bụrụ nke okpukpe. Fọdụ ndị nne na nna ekwenyeghị, na-ahụ omume ndị Hindu dị ka nkwalite akwadoghị okpukpe na ụlọ akwụkwọ, ha wee gbaa akwụkwọ. Ọbụna dịka òtù ahụ siri ọnwụ na ọ bụghị okpukpe na omume ya abụghị nke okpukpe, onye ọka ikpe etiti gọọmentị na 1977 kwadoro ndị nne na nna, gbochiri mmegharị ahụ ịkụzi TM n'ụlọ akwụkwọ ọha; E kwadoro mkpebi ya na mkpesa na 1979. Na mkpebi nke mkpebi ahụ, Maharishi nyere oku maka ndị na-atụgharị uche ka ha gbaga na Fairfield ka ha nakweere usoro omume ọhụrụ ọ na-ebido, na-ebuwanye oke nke ndị bịara ọhụrụ n'obodo ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ n'ozuzu obodo ahụ si n'ihe dị ka 8,700 na 1970 ruo ihe karịrị 9,400 na 1980 na gaa n'okpuru 10,000 na 1990 (US Census Bureau 2019).
Na nzaghachi oku nke guru 1979, ndị na -atụgharị uche gbagoro na Fairfield wee malite omume ọhụrụ Maharishi mepụtara. Ụfọdụ na -eme “Yogic Flying,” dịka ọmụmaatụ, na -awụkwasị n'elu akwa ma na -agụpụtara onwe ha mantra dị jụụ. Omume a dabere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ Hindu na-ezo aka levitation na-atụgharị uche. Mmegharị ahụ wukwara otu nnukwu nnukwu ụlọ [Foto dị n'aka nri] na ụlọ akwụkwọ MIU (nke nwere ike ijikwa ihe ruru mmadụ 1,000 ọ bụla) na -enwe olileanya ịbịaru ndị na -atụgharị uche kwa ụbọchị iji mepụta "Mmetụta Maharishi," nkwenye nke na -eme TM n'ime ọnụ ọgụgụ zuru ezu nwere ike weta udo. Ndị nkuzi chọrọ ndị ntụgharị uche zuru ezu iji gbasaa mmetụta Maharishi na mba niile site na ebe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ etiti US. Mụ nwoke gbakọtara n'otu nnukwu ụlọ na MIU, ebe ụmụ nwanyị gbakọtara na ọzọ. Mgbe ha na -ewu ma na -arụ ọrụ ebe obibi ya na -atụgharị uche, ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ hapụrụ ụlọ ụka Barhydt ka ọ daa, wee mebie ụlọ akụkọ ihe mere eme na 2001, n'ụzọ ihe atụ na -emebi njikọ mbụ nke Ndị Kraịst nke ụlọ akwụkwọ ahụ ma kpochapụ ụfọdụ ndị obodo Fairfield ndị lụrụ n'ụlọ ahụ. ma ọ bụ nwee njikọ miri emi ọzọ na ya.
Mgbe ha mechiri ụlọ akwụkwọ ọha na eze na mba niile na ngwụcha afọ ndị 1970 na 1980s, ndị na-akwado TM chọrọ ịgbasawanye usoro ahụ site na ịbanye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ọtụtụ ndị Fairfielders chọrọ ọrụ ọhaneze na mpaghara ma karịa. Na 1986, a hoputara onye nkuzi izizi n’obodo kansụl na Fairfield, ọtụtụ wee soro ọtụtụ afọ, na-ekwenye na ekwuru ọdịmma nke mahadum na mmegharị na ọchịchị obodo. Ndị ọkachamara guzobere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ha, Natural Law Party, na 1992 na otu onye isi ọrụ njem, John Hagelin, mere ka quixotic na-agba ọsọ ugboro atọ maka onye isi ala nke United States, nke ikpeazụ na 2000. Ndị na-atụgharị uche ka mma na ọkwa mpaghara, ya na mmadụ abụọ na-atụgharị uche na-eje ozi dị ka ndị isi obodo nke Fairfield site na 2001 ruo ma ọ dịkarịa ala 2021, na otu onye ọrụ rụrụ ọrụ na Iowa State Senate ruo na 2011, emesịa merie oche na Board of Supervisors in Jefferson County, nke dị na Fairfield.
Mmụba ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime obodo gosipụtara nnabata, ma ọ bụ opekata mpe, nke ọtụtụ ndị obodo Fairfield mepụtara maka ndị na -atụgharị uche. N'ime afọ ndị mbụ, ụfọdụ ndị obodo na -akwa ndị bịara ọhụrụ emo dị ka "roos," dị mkpụmkpụ maka ụmụazụ guru. Mana maka ọtụtụ ndị na -atụgharị uche mere Fairfield ebe obibi ha ihe karịrị afọ iri anọ dabara. Ụfọdụ sonyeere ụka obodo (n'agbanyeghị na ụka ole na ole na -achọghị mgbanwe ka na -egbochi ha), ha wee malite ọrụ n'ime otu omenala na nka obodo. Ha na ndị ọrụ ahọpụtara na -abụghị ndị na -atụgharị uche na -arụkọ aka. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị agbata obi ha anabataghị omume ha, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka na -adị n'ime otu ahụ, ọtụtụ n'ime ndị na -atụgharị uche nwere ntụsara ahụ n'ime obodo. Ndị na -eme TM zere ime ntọghata n'etiti ndị obodo, mmetụta dị mma ha nwere na akụ na ụba nyere aka wulite ndidi.
N'ime afọ ndị na - eduga na mgbe guru nwụsịrị, na 2008, ndị na - eme ihe nkiri David Lynch, bụ onye na - anụ ọkụ na Maharishi, bụ onye duziri David Lynch Foundation maka Mmụta Dabere na Nghọta na Udo Worldwa iji wepụta TM mmemme. ụlọ akwụkwọ (na-agbalị ọzọ gafee mba ahụ, n'agbanyeghị mkpebi ụlọ ikpe gọọmentị etiti), n'ụlọ mkpọrọ na n'akụkụ ndị ọzọ nke nnukwu nrụgide na mba ahụ. Ntọala ahụ dabere na iwu na Fairfield, yana inwe ọfịs na Los Angeles na New York. N'ikwekọ na usoro mgbasa ozi nke mmalite mmegharị ahụ na California, ntọala ahụ debara aha ndị ama ama ka ha nyere aka na mmemme ịkpa ego. Beatles Paul McCartney na Ringo Starr so n'ime ha, redio-Howck Stern na-akpa ọchị na ọchị ọchị Jerry Seinfeld.
Ndị ọzọ na -eme ememme na -akwado mbọ TM n'ime ọtụtụ afọ gụnyere Clint Eastwood, Mary Tyler Moore, Gwyneth Paltrow, Laura Dern, Hugh Jackman na Ellen DeGeneres. Onye na -ahụ maka ego Hedge Ray Dalio kpọbatara ndị na -azụ TM n'ime ụlọ ọrụ Bridgewater Associates ya ka ọ kuziere ndị ọrụ nka na ndị isi azụmaahịa ndị ọzọ na -akwado TM gụnyere onye nrụpụta Donna Karan. Ihe onyonyo mgbasa ozi na -akwado gụnyere onye nta akụkọ CNN mbụ Candy Crowley, onye chịkọtara Lynch foundation gala na 2010 wee kwuo okwu na mmalite mahadum Maharishi na Fairfield na 2012, yana ndị ọzọ kpọbatara ndị na -anụ ọkụ n'obi TM na mmemme ha, dị ka arịlịka CNN mbụ Soledad O'Brien na ABC George Stephanopoulos, yana Merv Griffin n'oge mbido ngagharị ahụ.
Ụfọdụ ndị ama ama nabatara ọkpụkpọ oku ka ha gaa Fairfield. Dịka ọmụmaatụ, nwa Paul McCartney James, butere ndị otu ya, Ìhè, n'obodo ahụ na 2009. Oprah gara, tụgharịa uche ma mee mmemme na obodo na-atụgharị uche n'ime na gburugburu obodo ahụ na 2012. Onye na-akpa ọchị na-eche ihu na Rubber Jim Carrey kwuru okwu na TM. mmalite mahadum ebe ahụ na 2014, otu n'ime ọtụtụ ndị na -akwado ntọala Lynch a ma ama ime nke ahụ.
Dị ka ọtụtụ obodo ime obodo Iowa hụrụ mbelata nke ọnụ ọgụgụ mmadụ, Fairfield na -eto. E mere atụmatụ ya na 10,600 na 2021, dị ka World Population Review si kwuo. Mgbalị achụmnta ego nke ndị na-atụgharị uche nyere aka nke ukwuu, ebe ha na-emepụta nnukwu azụmahịa na nkwukọrịta, nri na mpaghara metụtara nri, ego, na mpaghara gburugburu ebe obibi, na-ewe ndị ọrụ TM na ndị na-abụghị ndị na-atụgharị uche. Ụfọdụ ndị isi kwetara TM na ọ na -enye ha nlebara anya ha kwesịrị iji wuo azụmahịa ha, site na obere ụlọ ahịa mara mma ruo n'ịrụ ọrụ. Ụfọdụ ndị isi kwetara na ihe ịga nke ọma ha na -elekwasị anya na ntụgharị uche nyeere ha aka ibute n'okwu azụmahịa. (Weber 2014).
Ndị ọkachamara na-akwado ntụgharị uche dabere na mantra, na-eduzi opekata mpe ugboro abụọ n'ụbọchị maka nkeji iri abụọ oge ọ bụla. Dabere na ọmụmụ ndị ọrụ TM na -eduzi, ha na -arụtụ aka n'ọtụtụ uru ahụike na nke mmụọ site na omume ahụ. Echiche nke ndị otu a bụ na ntụgharị uche dị otu a abụghị nke okpukpe ma ndị mmadụ nọ n'okpukpe ọ bụla nwere ike ime ya. Ndị nkuzi ya na -enye ndị mmadụ ọzụzụ nkuzi ntụgharị uche, na -enye onye ọrụ ọ bụla mantra nke ekwuru na ọ bụ ihe pụrụ iche mana enwere ike ị nweta ya na ndepụta enyere ndị nkuzi. Enwere arụmụka maka ma mantra dabere na aha chi ma ọ bụ n'iwu okike.
Na agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ ndị na -eso TM na -amụ ma ọ bụ jigide nkuzi dị iche iche site na onye guru oge. Ọ sere ụfọdụ nkuzi ya, nke dabere na okpukpe Hindu, site na nke onye guru ya, Swami Brachmananda Saraswati Jagadguru. Maharishi nyekwara ihe ọhụrụ n'ime ihe ọ kpọrọ Science of Creative Intelligence. Ozizi ahụ, nke gosipụtara na usoro ọmụmụ enyere na ụlọ akwụkwọ Maharishi pre-K-12 na mahadum dị na Fairfield, gụnyere ntụnye aka na Chukwu, eluigwe na chi Hindu.
Ụdị ịgụ kpakpando, nke a maara dị ka Jyotish, na ụdị ihe owuwu ụlọ, nke a maara dị ka Sthapatya Veda, bụ akụkụ nke sistemụ ahụ na Fairfield nwere ụlọ na ihe owuwu ndị ọzọ arụnyere na ya. [Foto dị n'aka nri] Ndị na-akwado nwere, dịka ọmụmaatụ, ụzọ mbata ihu ọwụwa anyanwụ na ụlọ na-akwalite nghọta, ịba ọgaranya na mmezu ebe ọnụ ụzọ chere ihu na ndịda na-amụpụta egwu, mbibi na esemokwu. A na-eji okpuru okpueze pụrụ iche chọọ ụlọ ụfọdụ na ụlọ mma, nke a na-ekwu na ọ na-eme ka njikọ dị n'etiti ndị bi na eluigwe sie ike. A na-ewu ụfọdụ ụlọ gburugburu Brahmastans, ebe kpuchiri ihu dị ka ụlọ nsọ kwuru na-azụlite ndụ ezinụlọ. Sanskrit so na isiokwu ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ mmegharị ahụ nwere ike ịmụ, n'agbanyeghị na ọrụ nkuzi niile (ọbụlagodi sayensị kọmputa na akwụkwọ) na -etinye na nkuzi guru. Na mgbakwunye, dabere na mbuso agha guru nke mbubreyo na ekwentị, ndị na -eso ụzọ na -ezere iji kọmpụta ikuku n'ụlọ akwụkwọ mmegharị (ọ bụ ezie na mahadum ahụ zuru ike na igwe dị otú ahụ n'ọtụtụ mpaghara).
Maharishi gbasakwara na usoro ntụgharị uche ya na mmemme TM-Sidhi, nke chọrọ ntụgharị uche ọtụtụ awa kwa ụbọchị ma tinye nkwa nke levitation. Ndị kwere ekwe wuliri elu n'elu akwa dị otú ahụ "Yogic Flying", omume dabere na ederede ochie nke nkà ihe ọmụma Hindu, Yoga Sutras nke Patanjali. Omume ahụ nwere nkwa nke enweghị ike ịhụ anya na ike ịgagharị na mgbidi. Ndị na -eso ụzọ jikwa “Mmetụta Maharishi,” nkwenye na otu ndị na -atụgharị uche nwere ike belata ọkwa ime ihe ike n'obodo, obodo ma ọ bụ ọbụna mba. A kọpụtara ọnụọgụ dị iche iche ka oge na-aga, site na otu ụzọ n'ụzọ iri nke ndị okenye nọ na mpaghara enyere ruo otu narị ma ọ bụ otu puku. Mmegharị ahụ dabere na ntọala otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị mmadụ wee wepụta ọmụmụ nke na -ekwu na ọ ga -egosi nsonaazụ ya. N'ezie, ya na ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama zụrụ azụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka Harvard na ndị ọrụ ya, ngagharị TM ewepụtala ọmụmụ na-akwado mmetụta ndị a na-ekwu, n'agbanyeghị na ha na-apụtakarị n'akwụkwọ akụkọ mmegharị kama ịbụ akwụkwọ nyocha nke ndị ọgbọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ahụike.
Na Fairfield, mmegharị ahụ nwara ịkpọkọta ndị na -atụgharị uche zuru ezu ugboro abụọ kwa ụbọchị n'ime ụlọ ntụgharị uche ya iji nyefee Maharishi Effect na mba niile. Ruo oge ụfọdụ, ọ kpọbatara ụmụ okorobịa si India, ndị a maara dị ka pandits, ka ha na -atụgharị uche ruo ọtụtụ awa kwa ụbọchị na ogige dị na Maharishi Vedic City, [Foto dị n'aka nri] otu obere ndị mmepe obodo jikọtara mmegharị ahụ wuru na mpụga Fairfield. Weber 2014)
Site na Fairfield, mmegharị ahụ metụtakwara arụmụka zuru ụwa ọnụ gbasara mkpụrụ ndụ ihe gbanwere na nri na ngwaahịa ugbo. Ndị isi TM, ọkachasị ụfọdụ ndị jikọtara na Mahadum Maharishi International, na -emegide ụdị mgbanwe a, na -adọta nlebara anya mba na 1994 maka iweghachi ego enyemaka gọọmentị jikọtara na teknụzụ ihe ọkụkụ wee kwado "ụzọ Vedic" maka ọrụ ugbo. Ka arụmụka ahụ ghọrọ ihe dị mkpa maka ndị otu iwu okike na mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche, ndị na -akwado okwu ha gbasara mba na ụwa megide GMO. Fairfield ghọrọ ụlọ nke ụlọ ọrụ nwalere ngwaahịa dị iche iche n'ofe ụwa maka GMO, ID FoodChain (Grohman 2021).
Oge ntụgharị uche nke nkeji iri abụọ ọ bụla, na -eduzi ugboro abụọ kwa ụbọchị na nzuzo ma ọ bụ na nnọkọ otu bụ omume bụ isi nke ndị na -akwado TM. Ụfọdụ ndị na-eso ụzọ, ndị gabigara na mmemme TM-Sidhi, na-atụgharị uche ogologo oge kwa ụbọchị. Na Fairfield, ndị na-atụgharị uche na-ezukọ na nnukwu ụlọ n'ogige mahadum maka nnọkọ otu ma ọ bụ tụgharịa uche n'ụlọ ha ma ọ bụ na mahadum mmegharị ma ọ bụ tupu K ruo ụlọ akwụkwọ iri na abụọ. Ndị na -eme omume na mpụga Fairfield na -atụgharị uche na nzuzo.
Mgbe a na -akụzi ntụgharị uche na mmemme n'ụlọ akwụkwọ ọha n'okpuru aegis nke ntọala Lynch ma ọ bụ ndị mmekọ, omume a gụnyere emume arụmụka a maara dị ka puja. Ememme a gụnyere ụmụ akwụkwọ na -apụta n'ihu foto Maharishi guru na -abụ abụ na Sanskrit nke ndị nkatọ kwuru gụnyere okwu na -amata ike chi Hindu. Na mmalite iterations na 1970s (nke onye ọka ikpe gọọmentị weere dị ka okpukpe), mmemme ahụ gụnyere ntuziaka sitere na akwụkwọ ọgụgụ na guru's Science of Creative Intelligence.
Ndị ọkachamara na ndị na -arụbu ọrụ arụrịta ụka na -enweghị ike ikewapụ njikọ na okpukpe Hindu na TM. Ọkà mmụta okpukpe Hindu bụ Cynthia Ann Humes, na "Maharishi Mahesh Yogi: Beyond the TM Technique," na -arụ ụka, sị: "Olee mgbe bụ ụzọ nke nghọta, nke na -akwado emume dị iche iche nye chi ma dabere na ntụgharị uche nke na -ewepụta aha chi, ọ bụghị okpukpe?" Ọ na -agbakwụnye, "Ọ bụghị naanị na ọ bụ okpukpe Hindu, mana ọ bụ akara akpọrọ akpọrọ Hindu" (Forsthoefel na Humes 2005). Ndị ọkà mmụta Rodney Stark na William Sims Bainbridge dere na "ogologo oge, nkuzi na omume okpukpe ya ka ekpughere naanị n'ime ndị otu, ebe a na -enye ndị na -atụgharị uche n'ụzọ nkịtị dị ka enweghị usoro okpukpe." (Stark na Bainbridge 1985). Bainbridge na Daniel H. Jackson kpọrọ TM "otu òtù nzuzo okpukpe ahaziri nke ọma" na na 1981 bụ "enweghị mgbagha otu n'ime okpukpe ọhụrụ kachasị na America." (Wilson 1981).
Ndị otu mba ụwa nke ngagharị TM dabere na Vlodrop, na Netherlands, ebe ọtụtụ ndị otu US nọ n'isi Fairfield. Dr. Tony Nader, onye dibịa na neuroscientist nke zụrụ na Mahadum America na Beirut na Massachusetts Institute of Technology ma mee nyocha na Harvard na -eduzi nzukọ a n'ụwa niile. Nader onye Lebanon, onye aha ya bụ Tanios Abou Nader mụrụ na 1955 wee bụrụ onye isi nke mbọ TM zuru ụwa ọnụ mgbe guru nwụrụ na 2008. Onye ama ama na mmegharị ahụ na mmegharị US na Fairfield bụ John Hagelin, onye isi ala Maharishi. Mahadum mba ụwa na onye ọka mmụta Harvard zụrụ azụ, n'agbanyeghị na ọtụtụ mbọ ime ntọghata maka TM ugbu a sitere n'aka onye na-eme ihe nkiri David Lynch site na ntọala ya. Na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọdịmma nke mahadum dị na Fairfield na -aga n'ihu site n'aka ndị isi ahọpụtara mpaghara ka ha bụrụ ndị na -arụ ọrụ, ọkachasị ndị isi mayo na Fairfield na Maharishi Vedic City dị nso.
N'ihi na ọtụtụ ntuziaka TM na mkpali sitere n'aka guru ya, ọnwụ ya na 2008 hapụrụ nzukọ a oghere na elu. Maka ndị na -eso ụzọ, Maharishi na -adọrọ adọrọ bụ isi mmalite nke amamihe na onye isi etiti, yana nnukwu ihe nkiri maka mgbasa ozi mgbe ọ nọ na ọkwa ya. Ndị na -eso ụzọ ka na -adabere na teepu nkuzi guru na ihe odide ya. A na -agbaji ndị isi ugbu a, yana ọnụ ọgụgụ dịka Lynch na -ahụ nke ọma na mgbasa ozi karịa onye isi nzukọ ụwa Tony Nader ma ọ bụ onye isi US, John Hagelin. Ọ dịghị onye ndu ọ bụla gosipụtara ihe mkpali dịka onye guru oge na enweghị onye ga -anọchi mmụọ pụtara.
Ọ bụ ezie na Maharishi bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi dabere na mantra na mpụga India na 1960 na karịa, ndị ọzọ na-enye ụdị ntụgharị uche dị iche iche akụzila ya. Otu dị iche iche ejirila ịntanetị mee ihe iji nye ngwa nke na -enye usoro ntụgharị uche nke anaghị ebu ndị nkatọ ibu okpukpe hụrụ na ntụgharị uche Transcendental. Mana ngagharị TM na -agbaso ihe nlereanya ya nke ndị na -atụgharị uche na -ezukọ na ndị nkuzi. O nwere ọtụtụ ndị na -asọ mpi maka usoro ntụgharị uche karịa ka ọ dị na mbụ, na mgbakwunye, ebe a na -enye ụfọdụ ntụgharị uche n'ebe egwuregwu sitere na mgbatị ahụ na mmemme yoga ruo ụka na ụlọ nzukọ.
Mmegharị ahụ amụpụtakwala ndị nrụrụ aka na-akatọ ya na blọọgụ, dịka TM-Free Blog, na akwụkwọ, dịka Aghụghọ Transcendental, na ihe dị mfe n'ịntanetị (Siegel 2018).
Dika otu ndị dị ka ntọala Lynch na -achọ ọzọ ịkụzi usoro ntụgharị uche n'ụlọ akwụkwọ ọha, ha na -emegide mmegide sitere na otu okpukperechi na ndị na -ahụ mmemme ahụ ka ha na -akwado ụdị Hindu nke mebiri iwu gbochiri mgbasa nke okpukpe n'ụlọ akwụkwọ dị otu a (otu dị suit na 2021 na -aga n'ihu n'ụlọ ikpe gọọmentị etiti na Chicago). Ndị nkatọ, gụnyere ndị bụbu ndị na -emebu ahụ bụ ndị nọgidere na -ebi na Fairfield, na -arụ ụka na ngọnarị ngagharị nke ụdị okpukpere chi ya bụ aghụghọ. Ụfọdụ ndị hapụrụ obodo ahụ edeela akwụkwọ mkparị gbasara ọdịbendị mmegharị ahụ mepụtara na Fairfield (Shumsky 2018). N'agbanyeghi ihe akaebe otu a na -ewepụta na -egosi mmetụta dị mma omume ntụgharị uche ya nwere n'ahụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nsogbu, arụmụka okpukpe bụ nnukwu ihe mgbochi nye ndị na -akwado ya.
N'agbanyeghị ebubo na omume mmegharị ahụ nwere ike inye aka na ahụike uche, ọtụtụ igbu onwe onye n'etiti ndị na -eme Fairfield na ogbugbu nke nwa akwụkwọ 2004 na kampos nke a maara ugbu a dị ka Maharishi International University na -egosi na uru ya pere mpe nke ụfọdụ ndị na -anụ ọkụ n'obi tụrụ aro. Onye guru ahụ nabatara mgbakwunye ahụike nke dọtara obi abụọ n'etiti ndị ọrụ ahụike (Wanjek 2007).
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na -atụgharị uche arụọla ụlọ pụrụ iche gburugburu Fairfield, na -egosipụta ihe owuwu ụlọ pụrụ iche, ha ma ọ bụ ndị nketa ha nwere ike ịhụ ihe isi ike n'ịre ha ka oge na -aga, dịka mkpa ezinụlọ na -agbanwe. Ụfọdụ ụlọ dị ọnụ ahịa nke ukwuu karịa ọnụ ahịa etiti maka ụlọ ndị dị n'obodo mepere emepe. N'otu aka ahụ, ụdị ụkpụrụ ụlọ nke na -egosi ọtụtụ ụlọ ọhụrụ ugbu a na ogige mahadum nwere ike bụrụ ihe na -adịghị mma maka ndị ọzọ nwere ike bi na ya, ma ọ bụrụ na mahadum akwụsịchaa ma ọ bụrụ na mmegharị ahụ adalata ka oge na -aga.
Ọzọkwa nkuzi guru na ntụkwasị obi nwere ike ibelata ka oge na -aga. N'ịgbaso ọdịnala Hindu maka ndị nsọ, Maharishi kwupụtara n'ihu ọha na ya alụghị nwanyị, mana ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị mesoro ya ihe kwuru na ọ bụghị, na -eme mmegharị ahụ ihere. Otu, onye bụbu onye na-eso ụzọ Judith Bourque, bipụtara onwe ya akwụkwọ gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị ya na guru, Uwe silk, ụkwụ ụrọ. (Bourque 2010). Ụmụ nwanyị ndị ọzọ kọọrọ ya gbasara mmekọ nwoke na nwanyị ka ndị odeakụkọ dị oke egwu ma ọ bụ ndị nkwarụ sitere na mmegharị ahụ dere, bụ ndị tụrụ aro na guru bụ onye ihu abụọ na onye aghụghọ, na -ekwu okwu mkpesa guru.
N'ikpeazụ, ndị na -eme mmegharị ahụ na -aka nka. Ọ rịọrọ na mbụ ọtụtụ ihe iri abụọ na otu n'ime afọ 1960 na 1970, na idu ndú ya na ndị na-akwado ya n'oge gboo gụnyere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ dị otu a, ụfọdụ n'ime ha kwagara Fairfield na nzaghachi oku guru na 1979. Ịzụlite obere ụmụaka nke weghara oche n'afọ 2000, ka ndị okenye na-ejidesi ọrụ nhazi ha nke na-akwụkarị ụgwọ, yana imeju ọkwa ndị na-eso ụzọ, bụ ihe ịma aka dị adị, otu òtù okpukpe ọzọ echepụtala nsonaazụ dị iche iche. Maka Fairfield, ihe ịma aka a nwere ike ịkarị nnukwu, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị na -efe ofufe ebilitebeghị n'ọkwa onye ndu (Weber 2014).
*** Joseph Weber nwere ikike nwebisiinka nke onyonyo egosipụtara na profaịlụ a wee jiri ikike mee ihe.
Foto #1: Fairfield obodo square.
Image #2: Otu n'ime Golden Domes na Fairfield.
Image #3: Ụlọ dị na Fairfield nke onye na -atụgharị uche nwere.
Image #4: Isi mba ụwa nke isi ụlọ ọrụ udo ụwa na Vedic City.
Bourque, Judith kwuru. 2010. Uwe silk, ụkwụ ụrọ. E bipụtara onwe ya.
Mgbakọ Fairfield na Bureau Visitors. 2021. Fairfield: Tune n'ime Vibe anyị. Nweta site na https://www.visitfairfieldiowa.com/about/history na 25 July 2021.
Forsthoefel, Thomas A. na Cynthia Ann Humes. 2005. Gurus ke America. Albany: University University of New York Press.
Grohman, Gregory. 2021. Akụkọ banyere Iowa 80: Nkebi 1.
Jefferson County n'ịntanetị. nd Nbili na ọdịda nke kọleji Parsons. Nweta site na http://iagenweb.org/jefferson/ParsonsCollege/Parsons.html na 7 / 25 / 2021.
Onu ogugu.us. 2016. Nweta site na https://population.us/ia/fairfield/ na 25 July 2021.
Shumsky, Susan. 2018. “Ahụmịhe m ibi n'ime otu nzuzo maka afọ 20 - Nke a bụ otu m siri gbahapụ n'efu.” Huffington Post, October 17. Nweta site nahttps://www.huffingtonpost.co.uk/entry/cult-maharishi-mahesh-yogi_uk_5bc5e04de4b0d38B5871a8c3 na 25 July 2021.
Siegel, Aryeh. 2018. Aghụghọ Transcendental. Los Angeles: Janreg Pịa.
Stark, Rodney na William Sims Bainbridge. 1985. Ọdịnihu nke Okpukpe: Nzube nke Nzuzo, Ndozi, na Ọchịchị. Berkeley: Mahadum California Press.
Ụlọ Ọrụ Ọgụgụ nke United States. 2019. Nweta site na https://data.census.gov/cedsci/table?q=Fairfield%20Iowa%20population%201974&tid=ACSDT5Y2019.B01003 na 25 July 2021.
Wanjek, Christopher. 2007. "Ayurveda: Ezi, Ihe Ọjọọ na Ego." Ndụ sayensị. Nweta site na https://www.livescience.com/1367-ayurveda-good-bad-expensive.html na 25 July 2021.
Joseph, Weber. 2014. Ntụgharị uche transcendental na America: ka otu ọgbọ ọhụrụ si emegharị obere obodo na Iowa. Obodo Iowa: Mahadum Iowa Pịa.
Nnọọ, Susan Fulton. 1968. Ubi Ọma. Harlo Pịa.
Wilson, Bryan ed. 1981. Mmetụta Mgbasa Ọhụụ nke Ọhụụ Ọhụrụ. New York: Rose nke Sharon Press.